Warshadda Suumanka Saqafka Dhexe | Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Shirkadaha Biyo-Saaraha Shiinaha
SEcure-U ICU Buundada Caafimaadka
Buundada 'SEcure Medical Hanging Bridge' waxay siisaa barxad hufan oo hufan oo loogu talagalay ICU, CCU, PICU, NICU iyo wixii la mid ah 'SEcure-U' waa nooca loogu talagalay in lagu kala saaro qaybo qalalan oo qoyan.
SEKure-SJW Qalitaanka Qalitaanka
Daawada caafimaadka ayaa caan ku ah qolka qalliinka, ICU iyo qolka dhalmada. Waxay bixisaa barxad xamuul ah, il hawo iyo koronto siinaysa qalabka caafimaadka ee la xiriira. SHINVA SEcure-SJW qalliinka farsamada qalliinka ee leh Hal ama laba-gacmeed waxay siisaa jawi ammaan ah, hufan oo nadiif ah dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha.
SEcure-H ICU Buundada Caafimaadka
Buundada 'SEcure Medical Hanging Bridge' waxay siisaa barxad hufan oo hufan oo loogu talagalay ICU, CCU, PICU, NICU iyo wixii la mid ah 'SEcure-H' waa nooca loogu talagalay in lagu daro qaybo qalalan oo qoyan.